Umbhobho wegesi iHDPE uqinile kwaye ukhuselekile, ubukhulu becala usetyenziswa kubunjineli begesi ezidolophini. Ubomi obude bokuSebenzisa ngokukhuselekileyo ngaphezulu kweminyaka engama-50. Lex bhetyebhetye Umbhobho we-PE unobude kwikhefu elingaphezulu kwama-500%. Ayizukuqhekeka phantsi kweenguqu ezahlukeneyo zommandla onje ngenkxaso yomhlaba kunye nenyikima, kwaye inokhuseleko oluphezulu. Ukugoba irediyasi (R≥15D), akukho mfuneko yamalungu engqinamba, ekulungeleyo ukwakhiwa. Resistance Ukuxhathisa okungaginyisi mathe ulwandiso lomlinganiso wombhobho we-PE ngu-1.5X10-4mm / m ...
Imigodi yamalahle eHDPE Phantsi kombhobho
Nelangatye nekudodobalisa / antistatic Izinto antistatic kunye nelangatye nekudodobalisa imibhobho polyethylene esetyenziswa kwimigodi yamalahle zisasazwa ngokulinganayo emzimbeni umbhobho, ngoko antistatic kunye nelangatye nekudodobalisa izalathi zentsebenzo aziyi kuchaphazeleka ixesha elide ukusetyenziswa. Iipropathi ezinqabileyo kunye nelangatye elidibanisayo zihambelana nemigangatho kazwelonke kwaye zilungele indawo ezithile apho kunokutsha kunye nokuqhuma komhlaba. Khaphu khaphu / kulula ukuyifaka Ukuxinana kwemibhobho ye-polyethylene esetyenziswe kwi-co ...
Ukujonga umgangatho wamanzi aphantsi komhlaba kunye nemibhobho ekhethekileyo yeplastiki kwimithombo enzulu
Umbhobho weplastikhi uneempawu zobunzima bokukhanya, ukunganyangeki ngamandla, ukuhlala ixesha elide, iindleko eziphantsi, njl. Kumzi mveliso wequla lamanzi kumazwe angaphandle, ngakumbi kumazwe aphuhlileyo, ngaphezulu kwe-80% yemibhobho yemithombo yeplastiki iyasetyenziswa. Inkqubo yophuhliso lwexesha elizayo kwicandelo lemithombo yamanzi kukusebenzisa izinto ezintsha ukwenza amaqula ukusombulula iingxaki zomhlwa kunye nokukhula, ngakumbi ingxaki yokuchasana kwemithombo yamanzi kwiindawo ezinetyuwa eninzi. PVC-U umbhobho weplastiki uye ch ...